We Fight We Win. -- " More than Media ": ဦးမြင့် ဆွေ သား က နိင်ငံခြား တဲ့ ဗျို့( နစ်နေမန်း)
ဦးမြင့် ဆွေ သား က နိင်ငံခြား တဲ့ ဗျို့( နစ်နေမန်း)
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၀န်ကြီးချုပ် ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မြင့်ဆွေရဲ့သားဖြစ်သူ တာရာမြင့်ဆွေဟာလည်း သြစတြေလျနိုင်ငံသား ဖြစ်နေပါတယ်။
ဒုတိယသမတအဖြစ် အဆိုတင်သွင်း လျာထားခံထားရတဲ့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၀န်ကြီးချုပ် ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မြင့်ဆွေရဲ့သားဖြစ်သူ တာရာမြင့်ဆွေဟာလည်း သြစတြေလျနိုင်ငံသား ဖြစ်နေပါတယ်။
ထပ်မံကန့် ကွက်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းကတော့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၀န်ကြီးချုပ် ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မြင့်ဆွေရဲ့သားဖြစ်သူ တာရာမြင့်ဆွေဟာလည်း သြစတြေလျနိုင်ငံသား ခံယူထားသူ ဖြစ်နေကြောင်း ထပ်မံသိရှိရလို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၀န်ကြီးချုပ် ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မြင့်ဆွေရဲ့သားဖြစ်သူ တာရာမြင့်ဆွေဟာ သြစတြေလျနိုင်ငံသားခံယူထားသူ သူရဲ့ဇနီးဖြစ်သူကို လက်ထပ်ထိမ်းမြားပြီးတဲ့နောက်မှာ သူကိုယ်တိုင်လည်း သြစတြေလျနိုင်ငံသား ခံယူခဲ့ပါတယ်။
ကိုယ်ရူးကိုယ်ပတ် နေတဲ့ မြင့်ဆွေ၊
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၀န်ကြီးချုပ် ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မြင့်ဆွေရဲ့သားဖြစ်သူ တာရာမြင့်ဆွေရဲ့ဇနီးဖြစ်သူ (ဒေါက်တာမြင့်ဆွေနှင့် ဒေါ်ခင်သန်းဝင်းတို့ ၏ သမီးဖြစ်သူ) ဟာ သြစတြေလျနိုင်ငံ၊ ဆစ်ဒနီမြို့ (Fairfield City, Syndey, New South Wales State, Australia) မှာ နေထိုင်ကြပြီး၊ သူမဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ (၁၂) နှစ်ခန့် ကကတည်းက ဖီဂျီနိုင်ငံ (Fiji) ကနေ သြစတြေလျနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံသားခံယူပြီး ဆစ်ဒနီမြို့ သို့ရွှေ့ ပြောင်းအခြေစိုက်နေထိုင်ခဲ့ကြသူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၀န်ကြီးချုပ် ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မြင့်ဆွေအား ဒုတိယသမတအဖြစ် အဆိုတင်သွင်းထားမှုဟာ ဒုတိယသမတဖြစ်ဖို့လက်ရှိသတ်မှတ်ချက်များနဲ့ညှိစွန်းနေတာကြောင့် ထပ်မံကန့် ကွက်ပါတယ်။
Taya Myintswe is notason. He married to U Myint Swe's daughter.So he's U Myint Swe's son in law. The other facts( he moved from Australia from Fiji and became Australia citizen ) are true.I'd like to correct the error, there's no other intentions.
ဟဟ သတင်းတင်မယ်ဆိုလဲ သေသေချာချာစုံစမ်းပြီးတော့တင်ပေါ့ဗျာ..ဦးမြင့်ဆွေရဲ့ သားလား သမက်လားမသိပဲ အခြေမမြစ်မရှိ သတင်းဖြစ်ရင်ပြီးေ၇ာ ...တိုက်ခိုက်ရရင်ပြီးရောဆိုပြီးတင်နေတဲ့လူတွေရှက်ဖို့ကောင်းတယ် ဦးမြင့်ဆွေသားကဘယ်သူလဲ နာမည်ကဘာလဲဆိုတာအရင်စုံစမ်းလိုက်အုံး.... အော်မေ့လို့ နောက်တစ်ခုကျန်သေးတယ် cadet number ဘယ်လောက်လဲပါစုံစမ်းလိုက်အုံးနော့ f***ing b***ch